अचम्मको कला भएका नेपाली- बालुवा र सिन्काबाटै तस्बिरहरु बनाउँछन् – दैनिक नेपाल न्युज
अचम्मको कला भएका नेपाली- बालुवा र सिन्काबाटै तस्बिरहरु बनाउँछन्
काठमाडौंको बाँसबारीमा किरण राईको एउटा सानो कोठा छ, जहां उनी आफ्नो ठुलो मेहेनतले आकर्षक तस्विरहरु बनाईरहेका भेटिन्छन् । भोजपुर जिल्लामा जन्मिएका किरण राई सामान्य तस्विर हैन बालुवाले तस्विर बनाउंछन् । किरण राईले बालुवाको प्रयोगबाट मदकृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्य, रबि लामिछाने, राजेश हमाल, धुर्मुस सुन्तली लगायत थुप्रै नेपालका हस्तीहरुको तस्विर बनाईसके । संजोगको कुरा हामी राईको कोठामा पुग्दा उनी मेरै तस्विरलाई फ्रेम गर्दै थिए । एकैछिनको मेहेनतपछि उनले तस्विरलाई फ्रेममा सजाए अनि यो सुन्दर उपहार मलाई दिए ।
दर्शकबृन्द, किरण राईले सिन्का सिन्का जोडेर तस्विर बनाउन पनि थालिसकेका छन् । देख्दै आकर्षक उनले सिन्काबाट बनाएको पहिलो तस्विर लोभलाग्दो छ । अब अरु थुप्रै तस्विरहरु उनी सिन्काको प्रयोगबाट बनाउने सोचमा छन् । बालुवाको एउटा तस्विर पुरा गर्न किरणलाई कति समय लाग्छ ? तस्विर बनाउन उनको कति खर्च हुन्छ ? के किरणले यसबाट पैसा पनि कमाउंछन् ? यो जान्का लागि पुरा भिडियो हेर्नुहोला । किरण राई खेलाडी पनि हुन् । उनको खेल कला हामी अर्को भिडियोमा प्रस्तुत गर्नेछौं । आउनुहोस, यो भिडियो पुरा हेरेर साथ दिनुस ।
भ्रष्टाचारको मुद्दामा लामालाई साधारण तारेखमा छाड्न आदेश
भक्तपुरको सूर्यविनायकमा पहिरोले घरदेखि सडकसम्म भत्कायो